”Goolashu way iska iman doonaan, waana ku faraxsanahay Milan” – André Miguel – Gool FM
”Goolashu way iska iman doonaan, waana ku faraxsanahay Milan” – André Miguel
(Milano) 03 Nof 2017 – Qannaaska AC Milan ee André Miguel Valente da Silva ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay inuu uu ku guulaysan doono ama ku aflixi doono Serie A “Goolka 1-aad wuu iman doonaa.” ayuu yiri.
Silva ayaa 6 gool dhaliyay 8 kulan oo uu saftay Europa League tan iyo markii uu Milan kaga soo biiray dhanka FC Porto oo ay kasoo siisteen €38m xagaaguu, yeelkeede weli wax gool ah kama dhalinin Serie A balse ma rajo dhigin.
“Ma ku biiristayda Milan? Markii uu wakiilkaygu isoo wacay, aad baan u faraxsanaa, waayo ma filaynin. Markiibana waan aqbalay, mana ka xumi oo shaqadayda ayaan qabsanayaa,” ayuu 22-jirkani u sheegay Q&A.
“Dhanka is barbardhigga? Waxaan jeclahay inaan orjinaal noqdo, waxaan ahay Andre Silva waxaan leeyahay muuqaallo ii gaar ah, markase Milan taariikhdeeda laga hadlo waxaan jeclahay Inzaghi, Shevchenko iyo Rui Costa.” ayuu daba dhigay Silva oo sheegay inuu isagu soo hana qaaday waayahan lagu waalnaa jiilka CR7.
Cristiano Ronaldo oo la guddoonsiiyay Abaal marin hor leh
''Weli kama hadli karno hanasho horyaal'' - Matias Vecino